Peachtree- Stanley House Inn Bnb - I-Airbnb
Lolu hlu olwefulethi elisebenza kahle eliphansi i-Peachtree, elisendaweni ephansi yendlu yezihambi. Indawo yokulala nebhulakufesi yaseStanley House Inn itholakala kumabhulokhi angu-4 ukusuka kumlando kanye ne-hip Marietta Square enezindawo zokudlela ezingu-27, izindawo zokuphuza, izinkundla zemidlalo yeshashalazi ezi-2, amakhonsathi avulekile, imibukiso yobuciko, imakethe yabalimi, izitolo zakudala nezitolo. Izinto ezihehayo zendawo zifaka i-Gone with the Wind Museum kanye nezindawo zomlando we-Civil War.
Ifulethi lethu elihle elisebenza kahle esitezi esiphansi (akukho zinyathelo) liphelele linekamelo lokuhlala/igumbi lokulala (inkosi), indawo yokudlela ehlukene, ikhishi eligcwele elinesitofu nesiqandisi, kanye nebhavu elisha le-ceramic elinebhavu/ishawa. Ikhishi ligcwele izitsha, izinto zesiliva, izitsha, amabhodwe namapani, imicrowave kanye nomakhi wekhofi. Ukudla kwasekuseni kufakiwe. Amanani ahlanganisa ukudla kwasekuseni okugcwele, ukugcinwa kwendlu nsuku zonke, i-inthanethi engenantambo kanye nokupaka kwamahhala.
Sitholakala kumabhulokhi angu-4 ukusuka kumlando kanye ne-hip Marietta Square enezindawo zokudlela ezingu-27, izindawo zokuphuza, amathiyetha abukhoma angu-2, amakhonsathi avulekile, imibukiso yobuciko, imakethe yabalimi, izitolo zakudala nezitolo zokudlela. Izinto ezikhangayo zendawo zifaka i-Gone with the Wind Museum kanye nezindawo zomlando we-Civil War, okuhlanganisa i-Kennesaw Mountain, i-Cheatham Hill, kanye namathuna kazwelonke kanye ne-Confederate. Sikumizuzu engama-20 ukusuka ezindaweni ezikhangayo zedolobha lase-Atlanta.